नन्दकिशोर पुन पासाङ । कमान्डर, जनमुक्ति सेना ।
Posted Date : January 18, 2011, 11:22 am, Interviewer : NHC
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ।
Posted Date : December 23, 2010, 10:26 am, Interviewer : NHC
बाम विश्लेषक तथा पत्रकार मुमाराम खनाल ।
Posted Date : December 4, 2010, 11:04 am, Interviewer : NHC
रघजी पन्त । एमाले नेता ।
Posted Date : November 14, 2010, 11:57 pm, Interviewer : NHC
लीलामणि पोखरेल । एनेकपा माओवादी नेता ।
Posted Date : October 23, 2010, 1:47 am, Interviewer : NHC
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य, चन्द्र भण्डारी ।
Posted Date : October 2, 2010, 12:00 pm, Interviewer : NHC
काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी ।
Posted Date : September 14, 2010, 8:52 pm, Interviewer : NHC
एमाले नेता, राजेन्द्र गौतम ।
Posted Date : August 31, 2010, 11:56 am, Interviewer : NHC
राजतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने पारसको भनाइ Posted Date : August 20, 2010, 8:40 am, Interviewer : नयाँ पत्रिका दैनिकबाट अहिलेको राजनीतिबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
युवराज ज्ञवाली, एमाले नेता Posted Date : August 5, 2010, 2:55 am, Interviewer : Mahendra Rayamajhi
पटपटक निर्वाचन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि राजनीतिक अन्योल बढेको छ । निकास निकाल्ने बाटो के हुनसक्छ । प्रम चुनावमा तटस्थ बसेको नेकपा एमाले का नेता युवराज ज्ञवालीस“गको कुराकानी । प्रधानमन्त्रीको लागि मतदान कति पटक हुने हो?पटकपटक भोटिङ गर्ने, पटकपटक हार्ने, गजबको ठट्टा भएको छ । तपाईहरुले भोट किन नदिएको?प्रधानमन्त्री बनाएर मात्रै देशको समस्या समाधान हुन्न । अन्तरिम संविधान आएपछि दुइपटक सरकार बने, संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि पनि दश महिना मात्र बा“की छ । तर कुरा सरकार बनाउने र फर्ेर्नेमा सीमित भएको छ । आफ्नै दलको नेता प्रधानमन्त्री भएका बेलामा राजिनामा माग्ने तपाईहरु नै हो नि?संविधानसभा भनेको नेपाली जनताले ६०...
कुल बहादुर गुरुङसग गरिएको कुराकानी ।
Posted Date : July 11, 2010, 6:17 pm, Interviewer : Mahendra Rayamajhi
नया प्रधानमन्त्री पदका लागि मुख्य दलहरुबाट नेताहरुले एक से एक नाम दिइरहेका छन् । खासगरी मुख्य तीन दल र मधेशवादी दलहरुबाट पनि नेताहरुका नाम आएका छन् । काग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका महामन्त्री कुल बहादुर गुरुङसग गरिएको कुराकानी । तपाईको जन्म कहा भएको - राजनीति कहिले सुरु गर्नुभयो ?म इलाममा जन्मेको । उतिबेला नगरपालिका नभएपनि अहिले नगरपालिका भएको छ । वडा नम्बर २ मा मेरो घर हो । जब २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, बीपी कोइराला भनेर नाम आउन थाल्यो, त्यहीबेलाबाट विद्यालयबाट राजनीति सुरु भयो । त्यतिबेला हाफ पाइन्ट र कमिज लगाउनेलाई काग्रेस भन्थे । मेरो ठुलोबुबा गान्धीको चर्खा चलाउनेमा जानु भएको रहेछ, त्यतिबेला उहालाई पक्रेर नेपाल नै पठाइदिएछन्, आएपछि...
सभासद सुनीलबाबु पन्तसँग गरिएको कुराकानी ।
Posted Date : June 21, 2010, 7:20 am, Interviewer : NHC
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसगको वार्तालाप Posted Date : June 3, 2010, 5:50 pm, Interviewer : Mahendra Rayamajhi
दर्इ वर्षा नबनेको संविधानसभाले एक वर्षम्याद थपेपछि बनाउला कि नबनाउला भन्ने चर्चा अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो बहस हो । जेठ चौधपछि अर्को वर्षो जेठ चौधमा नेपालमा के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । प्रस्तुत छ संविधानविद भीमार्जुन आचार्यस“गको वार्तालाप । जेठ चौधमा समय नथपिएको भए के हुन्थ्यो ?संविधानसभाको म्याद नथपिएको अवस्थामा संविधानसभाको वैधता समाप्त हुन्थ्यो । अन्तरिम संविधानअनुसार राज्यका अन्य अंग भने यथावत रहन्थे । अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको संविधानसभा र राज्यका अन्य निकायको हैसियत कसरी फरक हुन्छ ?यो मुलुकमा संविधानसभा गठन हुनुभन्दा अघि पनि राज्य भन्ने त थियो । संविधानसभाभन्दा अघि सरकार पनि थियो । मैले अहिलेको वा कुनैबेलाको सरकारको...
म प्रायश्चित्त गर्न हिच्किचाउँदिनँ ―पूर्वयुवराज पारस शाह Posted Date : May 14, 2010, 7:23 am, Interviewer : Weekly Nepal
यतिखेर तपाईं मिडियाहरूमा निकै खुल्न थाल्नुभयो नि, यसको विशेष कारण छ कि? – त्यस्तो विशेष कारण केही पनि छैन र निकै खुलेको या खुल्दैनखुलेको भन्ने पनि होइन। वर्तमान परिस्थितिमा देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता सङ्कटमा पर्न लागेको देखिएकोले देशको एक नागरिकको हैसियतले चुपलागी बस्न मन मानेन। त्यसैले म राजनीतिक व्यक्ति नभए पनि एउटा सचेत नेपाली नागरिकको हैसियतले आफ्नो देशप्रतिको दायित्वबोध गरेर जिज्ञासुहरू माझ आफ्नो विवेकअनुरूप केही कुरा राखेको हुँ। मेरो विचारमा राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, शान्ति र विकासका निम्ति प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो विचार खुलासा गर्नु जरुरी ठान्दछु। ० सामाजिक सेवा र धार्मिक कार्यक्रमहरूमा तपाइको संलग्नता यतिबेलै किन होला? –...
लक्ष्मण घिमिरे: काग्रेस संविधानसभा दलका मुख्य सचेतक Posted Date : May 10, 2010, 1:56 pm, Interviewer : Mahendra Rayamajhi
मयमै संविधान बनाउने असम्भव हु“दै गएपछि यसबारे कस्ले पहिले बोल्ने भन्नेमा दलहरुबीच मुख ताकाताक छ । समयमै काम नभएको जिम्मेवारी लिने क्रममा दलहरु सकेसम्म अरुलाई नै देखाउन खोज्छन्, काग्रेस संविधानसभा दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेस“गको कुराकानी । संविधान बन्छ त ?बन्छ, बन्दैन भन्नुभन्दा पनि बन्नर्ुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता छ । तर प्रतिबद्धताले मात्रै पुगिरहेको अवस्था पनि छैन । समय यति संकुचित भइसक्यो कि अहिले हामीले संविधानको धारा दफाबार छलफल गर्दै जानुपर्ने दिनमा संविधानसभाबाट संवैधानिक समितिमा मस्यौदा प्रतिवेदन लैजान सकिरहेको अवस्था पनि छैन । त्यसैले यो समय संकुचनको अवस्थालाई हर्ेर्ने हो भने चमत्कारिक जस्ता भाषाको प्रयोग गर्दा पो ठीक हुन्छ कि । संविधानजस्तो...
नारायणमान बिजुक्छे रोहित, अध्यक्ष, नेमकिपा ।
Posted Date : April 9, 2010, 1:20 pm, Interviewer : NHC
समयमै संविधान नबन्ने आशंकाबीच विभिन्न खालका अड्कल हुन थालेका छन् । तोकिएकै मितिमा संविधान नबने के हुन्छ, विकल्प ? प्रस्तुत छ, नेपाली राजनीतिका पुराना खेलाडी बिजुक्छेको विचार । नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढेको पाउनुभएको छ ? सहमतिका लागि छलफल भइरहेकै छ । सरकार प्रमुख को हुने कसले चलाउने भन्ने सहमति ठुला दलबीच भइसकेको होला, शायद अब मतदान मात्र बाँकी होला । तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण बन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ? हिजो अस्ति संवैधानिक समितिको बैठकमा पार्टीका नेताहरुको अभिव्यक्तिअनुसार जेठ चौध गतेभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता आएको छ । प्रतिबद्धतालाई मान्ने आधार के हुनसक्छ ? घरीघरी कुरा फेरेर जनतालाई जिल्लाउने काम त हुन्न...
डा. नारायण खड्का, काग्रेस नेता Posted Date : March 7, 2010, 8:47 pm, Interviewer : Mahendra Rayamajhi
जेठ चौध भित्रै संविधान बन्छ भन्न सत्ता साझेदार र सत्ता बाहिर रहेका दलका नेताहरुले अझै छाडेका छैनन् । समयमै संविधान बन्दैन भन्ने पनि छन्, हाल सरकार परिवर्तनको कुरा पनि चलेको छ । यही विषयमा का“ग्रेस नेता डा. नारायण खड्कास“ग गरिएको कुराकानी ।
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल
Posted Date : February 23, 2010, 8:57 pm, Interviewer : Mahendra Rayamajhi
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल । तीन दलले बनाएको राजनीतिक संयन्त्रको बारेमा धेरै कुरा भएपनि यसले के गर्‍यो भन्नेमा अझै सोच्नुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न दलले संयन्त्रबारे असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । फोरम पनि एउटा यस्तै दल हो, जसले संयन्त्रको औचित्य देखेको छैन । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवस“ग लिइएको अन्तरवार्ता । उच्चरस्तरीय संयन्त्र के को लागि बनेको होला? संयन्त्र नभएर यो उच्चस्तरीय राजनीतिक षडयन्त्र हो । किनभने यसमा अपारदर्शिता छ । अपारदर्शी कसरी भयो ?संयन्त्र बनाउनुअघि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुस“ग छलफल गरेर त्यसको क्षेत्राधिकार, आचारसंहिता, यसको वैधानिकता तोक्नुपथ्र्यो, तर त्यो हुन सकेन । साथै सरकारस“ग यसको...
लोकेन्द्र बिष्ट मगर Posted Date : February 14, 2010, 10:00 pm, Interviewer : Mahendra Rayamajhi
राज्य पर्ुनर्संरचना तथा शक्ति बा“डफा“ड समिति सभापति । संविधानसभाका ११ ओटा विषयगत समितिमध्ये बढी विवादित समितिको मस्यौदा कुनै छ भने त्यो राज्य पर्ुनर्संरचना तथा शक्ति बा“डफा“ड समितिको मस्यौदा हो । प्रस्तुत छ,समितिको काम र विवादित विषयबारे सभासद मगरस“ग गरिएको कुराकानी ।प्रतिवेदन तयार पार्न निकै समय लगाउनुभयो, किन त्यस्तो भयो?लामै कसरत भयो । १० महिनामा त बच्चा ने जन्मिन्छ । हामीलाई १३ महिना एक हप्ता लाग्यो, राज्यपर्ुसंरचनाको बच्चा जन्माउन । हामीले सोचेसम्म बच्चा ठीकै छ भन्ने लागेको छ । विभिन्न दलले फरक फरक अवधारणा र नक्सा दिएका थिए, तीमध्ये हामीले चौधओटा प्रदेश बनाउने नक्सालाई पास गर्‍यौं । नेपाली का“ग्रेसले नक्सा दिएन, सैद्धान्तिक अवधारणा मात्रै दियो । अरु...
कमल थापा, राप्रपा नेपाल ।
Posted Date : February 6, 2010, 5:16 pm, Interviewer : NHC
राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा राजनीतिमा निकै आइरहने नाम हो । के पञ्चायत, के २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र, गणतन्त्र आएपछि किन नहोस् नेता थापा विभिन्न विषयले चर्चामा रहने गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँगको वार्तालाप । ...